Matakkal: Dargaggoon Oromoo tokko ajjeefamuun reeffi isaa lafarra butamuu - Independent Oromia
Matakkal: Dargaggoon Oromoo tokko ajjeefamuun reeffi isaa lafarra butamuu
Dargaggoon Oromoo, Saamu’eel Maammoo – Barataa kutaa Sagalii, Konyaa Matakkal, Ona Dibaax, Magaalaa Qorqaa keessatti, Kibxata dheengaddaa (Bit 2, 2021) hidhattoota MKII’n uleen reebamuun ajjeefamuun, reeffi isaa lafarra harkifamuu; darbees, Oromoonni reeffa isaa baatanii magaalaa keessa akka naannessan taasifamuu.
Saamichii fi mancaafamni qabeenya Oromoo irratti, Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Yamaaloogii Walal keessatti, LMKII’n raawwatamu jabaatee itti-fufuun, torban kana keessa manni jireenyaa Oromoo baay’inaan afurtama (40) ta’an gubamuu.
Hidhaa fi dararaan Uummata Oromoo irratti, akkasumas, saamichii fi mancaafamni qabeenya Oromoo irratti, Konyaalee: Jimmaa, Iluu Abbaa Booraa fi Bunnoo Beddellee keessatti, LMKII’n raawwatamaa ture, tibbanas jabaatee jiraachuu.
Seenaa Lafaa fi Saba Oromoo Matakkal › Sababoota duguuggaa sanyii
Seenaa Lafaa fi Saba Oromoo Matakkal | Sababoota Duguuggaa Sanyii – audio
Oromootni 4 Jimaata darbe ajjeefaman awwaalcha dhorkamanii jiraachuu
Oromoonni 100 ol ta’an ajjeefamuun awwaalcha dhorkamuu › Matakkal